रुस या चीनसँग युद्ध भए अमेरिका हार्न सक्ने ! अमेरिकी संसदीय समितिको चेतावनी ! - Everest Dainik - News from Nepal
रुस या चीनसँग युद्ध भए अमेरिका हार्न सक्ने ! अमेरिकी संसदीय समितिको चेतावनी !
वासिंगटन, कार्तिक २९ । विश्वमै सबैभन्दा बढी रकम रक्षामा खर्च गर्ने संयुक्त राज्य अमेरिकालाई अझै रुस र चीनसँग युद्ध भएको खण्डमा हार्न सक्छ । अमेरिकाली संसद्को एउटा समितिले बुधवार यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
यस वर्ष अमेरिकाको रक्षा बजेट ७ खर्ब डलर रहेको छ । यसका बाबजुद पनि अमेरिकी संसद्को उक्त समितिले यस्तो चेतावनी दिएको हो । अमेरिकी कांग्रेसको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आयोग अर्थात नेसनल डिफेन्स स्ट्राटिजी कमिसन- एनडीएसले गरेको अध्ययनबाट यस्तो नतिजा निस्केको हो । एनडीएसको अध्ययनले अमेरिकाको रुस र चीनसँग शक्ति सन्तुलन निर्धारित गर्ने गर्दछ ।
निरन्तर घट्दो सैन्य गतिविधिप्रति चिन्ता
एनडीएसमा कयौं पूर्व डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन अधिकारीहरू कार्यरत रहेका छन् । उनीहरूले अमेरिकाले निरन्तर रक्षा बजेटमा कमी गरिराखेको र सैनिकहरूले पाउने सुविधा निरन्तर घटाउँदै गैरहेको बताएका छन् । उता चीन र रुस भने अमेरिकाको शक्ति घटाउने प्रयासमा रहेको उनीहरूको ठम्याई छ ।
आयोगका अनुसार अमेरिकालाई उसको सेनाले नै सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउने गर्दछ । तर अब उसको सैन्य शक्तिमा निरन्तर ह्रास आउँदै गइरहेको छ । २१ औं शताब्दीमा अमेरिका आतंकवाद विरुद्धको संघर्षमा बढी केन्द्रित रहेकाले उसको ध्यान क्षेप्यास्त्र सुरक्षा प्रणाली, साइबर स्पेस अप्रेसन साथै जमिन र पनडुब्बीबाट हुनसक्ने आक्रमण रोक्ने क्षमता बढाउने तर्फ भने उसको ध्यान नगएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिकाका सक्षम प्रतिद्वन्दीहरू, विशेष गरेर चीन र रुस विरुद्ध सैनिक अभियान संचालन गर्ने र सो सम्बन्धी योजना बनाउन विशेष कौशल आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै उक्त प्रतिवेदनमा अमेरिकामा आलोपालो सत्तामा आइराख्ने ठुला पार्टी डेमोक्र्याट्स र रिपब्लिकनले यससम्बन्धमा कुनै उल्लेख्य काम नगरेको भनिएको छ । अमेरिकामा २०११ बाट सैनिक बजेटमा निरन्तर कटौती हुँदै गैरहेकोमा प्रतिवेदनमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
विश्वभरि प्रभाव गुमाउँदै अमेरिका
एनडीएसको अनुसार पेन्टागनले सही दिशामा कम गरिरहेको भएपनि अमेरिकाले दुश्मनको आक्रमणको जवाफ कसरी दिने भन्ने प्रश्न अझै जस्ताको त्यस्तै रहेको बताइएको छ ।
संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा युरोप र एसियाभरि अमेरिकाको प्रभावमा निकै कमी आएको बताइएको छ । विभिन्न मोर्चाहरूमा बदलिएको सैन्य सन्तुलनले युद्धको अवस्थामा अमेरिकी सेनाले निकै ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्ने चिन्ता समेत प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस किन विदेशी प्रतिभालाई आकर्षित गर्दैछ चीन ?
आयोगको उक्त रिपोर्टमा रुस र चीनसँगको युद्धमा अमेरिकाको जीत या हार दुवै हुनसक्ने र उसले दुई तीन मोर्चाहरूमा एकै साथ लड्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यस वर्ष पेन्टागनले सेनाका लागि ७ खर्ब डलर (लगभग ८० लाख करोड नेपाली रुपैयाँ) बजेट विनियोजन गरेको छ । यो रुस र चीन दुइतीको संयुक्त रक्षा बजेटभन्दा बढी हो । तर उक्त संसदीय समितिले अमेरिकालाई आफ्नो लक्ष हासिल गर्न यो बजेट पनि कम भएको जनाएको छ । समितिले रक्षा बजेटमा वर्षेनी ३ देखि ५ प्रतिशत वृद्धि गर्नु पर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
ट्याग्स: China, US vs Russia, World War